Nje ukuba uthathe isigqibo sokuyisebenzisa | I-Ota Citizen's Plaza
Indlela yesicelo kunye nokusetyenziswa kokuhamba>
Intlanganiso yaphambi kokuwongwa
Xa usebenzisa iholo enkulu, iholo encinci, igumbi lemiboniso, kunye nendawo yokwenza umthambo
Izinto zokuzonwabisa, kwaye xa usebenzisa amaziko okonwatyiswa abonwa efanelekile kulawulo lwendawo leyo, emva kokuba uzise la maxwebhu alandelayo kwinyanga enye phambi komhla wokusetyenziswa njengomthetho jikelele, nceda uye kunobhala wenkundla nentlanganiso.
Inkqubo okanye itshathi yenkqubela phambili, amaphetshana, isicwangciso sokhuseleko, itikiti lokwamkelwa (njengesampulu).
Ukongeza koku kungasentla, iminyhadala yeholo enkulu ngumzobo weqonga, umzobo wokukhanyisa, kunye nomzobo we-acoustic.
(Ukuba akwenziwanga sigqibo, nceda usazise igama lomntu ophetheyo kunye neenkcukacha zonxibelelwano.)
Xa usebenzisa igumbi lokuziqhelanisa, isitudiyo somculo, igumbi lenkomfa, igumbi lesitayile saseJapan, igumbi leti, igumbi lobugcisa
Nceda ube nentlanganiso nabasebenzi malunga nokubekwa kwegumbi kunye nezixhobo ezifanelekileyo eziza kusetyenziswa ubuncinci iintsuku ezi-2 phambi komhla wokusetyenziswa.
Xa kuthengiswa iimpahla
Nceda uqiniseke ngokungenisa "isicelo sokuvunywa kokuthengiswa kwempahla," eyahlukileyo.
Isicelo sokuvunywa kwentengiso yeempahla, njl.
Isaziso kwiiofisi zikarhulumente ezichaphazelekayo, njl.
Kuxhomekeke kumxholo womsitho, kunokuba yimfuneko ukwazisa ezi ofisi zikarhulumente zilandelayo.
Nceda ujonge kwangaphambili kwaye ulandele iinkqubo eziyimfuneko.
Ukusetyenziswa komlilo, njl. Icandelo lokuHlolwa kwesikhululo soMlilo iYaguchi
2-5-20 Tamagawa, Ota-ku Ifowuni: 03-3758-0119
Ukhuseleko njl. Isikhululo samaPolisa iIkegami
3-20-10 Ikegami, Ota-ku Ifowuni: 03-3755-0110
Ilungelo lokushicilela Umbutho waseJapan wamalungelo ababhali boMculo
Isebe leKhonsathi yeJASRAC yaseTokyo
I-Nippon Life Shinjuku West Exit Building 10F Ifowuni: 03-5321-9881
Nceda ucacise igama lomququzeleli, ulwazi loqhakamshelwano, njl.
Ukuba ungathanda ukuthumela iiposta kunye namaphecana eholweni, nceda usazise. (Kukhawulelwe kwiminyhadala ebanjelwe ehotele)
Nceda usazise njengoko unokukwazi ukuthumela ibhodi yomqondiso kwindawo echongiweyo kuphela ngomhla womsitho.
Ulwazi ngeziganeko lunokuthunyelwa simahla kwimagazini yolwazi epapashwe nguMbutho wokuKhuthaza iNkcubeko yeWadi nakwiwebhusayithi. (Kuxhomekeke kumxholo, asinakuyamkela)
Nceda ugcwalise iphetshana elichongiweyo uze ulingenise kumntu ophetheyo.
Ishedyuli yomsitho yokwakha yesicelo sokushicilelwa kolwazi kwiphepha lasekhaya
Malunga nolawulo lwezixhobo
Ngomhla wosetyenziso, nceda ubonise ifom yokuvunywa kokusetyenziswa kwidesika yokwamkela kumgangatho ongaphantsi wokuqala ngaphambi kokusebenzisa igumbi.
Ukulungiselela intlekele, nceda uthathe onke amanyathelo anokubakho njengokukhokelwa ngobungxamo kwabahambi, unxibelelwano olungxamisekileyo, uncedo lokuqala, njl., Ngokubamba intlanganiso eneenkcukacha kunye nabasebenzi kunye nokunikezela abasebenzi ngokutsha.
Phantsi koMthetho weNkonzo yoMlilo, nceda uqaphele ngokungqongqo umthamo weendwendwe.Ayinakusetyenziswa ngaphaya komthamo.
Kwimeko yengozi okanye umntu ogulayo, xelela abasebenzi ngoko nangoko kwaye ulandele imiyalelo.
Nceda uqaphele ukuba ihotele ayinaxanduva lobusela.
Kukho amagumbi eentsana kumgangatho ongaphantsi wokuqala nowesithathu, ke nceda wazise abasebenzi ukuba uyafuna ukuwasebenzisa.Nceda uyilawule ngokuzilawula komsebenzisi.
Emva kokusetyenziswa, buyisela izixhobo ezisetyenzisiweyo kwimeko yokuqala.Ukongeza, nceda uqiniseke ukuba uziphathela izinto zakho kwaye ungazishiyi kwindawo leyo.
Ukuba isibonelelo okanye isixhobo sonakalisiwe okanye silahlekile, kuya kufuneka ubuyekeze ngomonakalo.
Nceda uthathe nasiphi na isixhobo senkunkuma esenziwe eqongeni, esifana nenkunkuma evela ekutyeni nasekuseleni.Ukuba kunzima ukuyigodusa, siza kuyicubungula ngentlawulo, ke nceda usazise.
Ukuba kunyanzelekile ukuba ulawule indawo, umsebenzi unokungena kwigumbi olisebenzisayo.
Umququzeleli kufuneka alungiselele abasebenzi abafunekayo ukulungiselela nokucoca iindwendwe, ukuthatha, ukonwabisa, njl.Kuxhomekeke kumnyhadala, umququzeleli unokulungiselela abasebenzi beqonga, ukukhanya, isandi, njl.
Ukuba kulindeleke ukuba inani elikhulu leendwendwe liza ngaphambi kwexesha lokuvula, okanye ukuba kunokwenzeka ukubhideka ngexesha lomsitho, luxanduva lomququzeleli ukwabela abaququzeleli aboneleyo.
Nceda uqinisekise ukuba umququzeleli uyakubona oku kulandelayo kwaye wazise iindwendwe.
Sukuncamathisela iphepha, iteyiphu, njl. Ezindongeni, kwiintsika, kwiifestile, kwiingcango, kwimigangatho, njl. Njl.
Musa ukuthengisa okanye ukubonisa iimpahla, usasaze izinto eziprintiweyo, okanye ngenye indlela wenze into efanayo ngaphandle kwemvume.
Musa ukuzisa izinto ezinobungozi okanye izilwanyana (ngaphandle kwezinja zenkonzo) ngaphandle kwemvume.
Ukutshaya akuvumelekanga kwisakhiwo sonke.Sukutya, ungaseli okanye utshaye ngaphandle kweendawo ezichongiweyo.
Sukuvelisa ivolumu enokuphazamisa ulawulo lwendawo okanye ibangele ukuphazamiseka kwabanye.
Sukubangela ukuphazamiseka kwabanye, njengokwenza ingxolo, ukungxola, okanye ukusebenzisa ubundlobongela.
Malunga nokusetyenziswa kwendawo yokupaka
Kukho umququzeleli okhethekileyo kumgangatho ongaphantsi wesibini. (Umda wobude 2m)
Siza kukunika itikiti lokupaka kumququzeleli. (Inombolo encinci) Ayinakusetyenziswa ngaphandle kwetikiti lokupaka.
Nceda uthumele itikiti lakho lokupaka kwifestile yemoto yakho.
Akukho ndawo yokupaka kubasebenzisi ngokubanzi.
Umququzeleli kufuneka aqiniseke ukuba abasebenzisi gabalala abeza ngemoto.
Ukusetyenziswa kwesihlalo esinamavili
Nceda ngenisa ukusuka kumnyango wangaphambili kumgangatho wokuqala wesinyathelo.Nceda usebenzise ilifti ukufikelela kwigumbi ngalinye.
Ukuba ungena ukusuka kwindawo yokupaka kumgangatho ongaphantsi wesi-2, ungasebenzisa isixhobo esinyukayo, nangona kukho amanyathelo. (Ubunzima ukuya kuthi ga kwi-150 kg) Ukuba unxibelelana nathi kwangaphambi kwexesha, umsebenzi uya kuhlala elindile.
Amagumbi okuphumla anezinto ezininzi abekwe kumgangatho ongaphantsi wokuqala, kwiholo enkulu kumgangatho wokuqala, nakwimigangatho yesithathu.
Izihlalo ezinamavili eziqeshisayo ziyafumaneka kwesi sakhiwo, ke nceda usazise xa unqwenela njalo.